Uyezve, marongerwo design, chirimwa zvemaoresa uye Dino toyi kupa etc.is kuwanikwa mubasa redu pashure kutengeswa ......
Sei We kugadzira ari Animatronic Dinosaurs
Welding Steel Structure pamusoro Animatronic Dinosaur
Tinoita zvokuimba magadzirirwo ose dainoso pamberi kugadzirwa kuti themhave yakanaka pepuranga uye nechokwadi vanogona kushanda pasina chero kukakavadzana, saka kuti dainoso anogona noupenyu basa refu.
Batanidza All Motors uye Sculpture, Texture Basa iri High Density Foam
High arambe achirema furo nechokwadi muenzaniso zvikuru akangwarira. Professional kuvesa vatenzi vane makore anopfuura 10 ruzivo. Perfect zvikuru dainoso muviri zvachose kwakavakirwa dainoso marangwanda uye mashoko yesayenzi. Ratidza vashanyi sezvazviri uye lifelike dinosaurs.
Sking-kusonanidzwa By Smearing Silicone
Painting tenzi zvinogona kuonesa dinosaurs maererano vatengi racho. Mumwe dainoso kuchavawo kuramba vakavhiyiwa yokuedzwa rimwe zuva asati kutumirwa.